Umhlahlandlela wokukhetha amahhanisi we-canicross: zijwayeze ezemidlalo nenja yakho | Izinja Umhlaba
Ngabe ufuna ukuzijwayeza i-canicross nenja yakho? Ukuze uphephe nokuthi zombili isilwane sakho kanye nawe uphathe konke okudingayo, kubalulekile ukuthi inja yakho inayo i-canicross harness.
Kepha anjani amahhanisi e-canicross? Ngabe eminye imikhiqizo ingcono kuneminye? Iziphi izinzuzo ezinikezayo uma kuqhathaniswa nehhanisi elijwayelekile? Ungathenga kuphi okuhle kakhulu? Uma uzibuza yonke le mibuzo, nalu ulwazi oludingayo ukuze wenze ukuthenga kwakho kulungile.
1 Amahhanisi amahle kakhulu we-canicross
2 Yini i-canicross
3 Anjani amahhanisi e-canicross
4 Ngingakwazi ukusebenzisa i-harness ejwayelekile ye-canicross?
5 Izinzuzo zama-canicross harnesses
6 Izinhlobo ezinhle kakhulu zamahhanisi we-canicross
7 Ungathenga kuphi ihhanisi le-canicross
Amahhanisi amahle kakhulu we-canicross
I-LASALINE Harness ye ...
ICanicross yaziwa njengomsebenzi wezemidlalo owenziwa nenja yakho. Kuqukethe ukugijima nenja eboshwe okhalweni. Kulokhu, kusetshenziswa ibhande elikhethekile, kanye ne-leash ne-carabiner, elixhuma ekuboshweni kwenja. Yingakho kubaluleke kakhulu ukuthi kusetshenziswe i-canicross harness, ngoba iyilungele kakhulu lo mdlalo.
Lo msebenzi wenziwe eSpain iminyaka engaphezu kwengu-15, yize kwezinye izingxenye zeYurophu benemiqhudelwano. Imayelana ne- ukuzivocavoca umzimba okudinga ukulinganisela okuhle nokuqonda phakathi komuntu nenja, ngoba uma ingekho, imiphumela yabo bobabili ingaba mibi.
Anjani amahhanisi e-canicross
Abaningi bacabanga ukuthi amahanisi we-canicross akudingeki ukuthi abe ethize, kepha ukuthi isebenza nanoma yini ethengiwe. Futhi nokho, kuyefana nokuthi ubugqoke amateki angama-10 e-euro namateki angama-90 akhethekile nongoti. Ungazivocavoca ngempela ngazo zombili, kepha imiphumela emzimbeni wakho (ikakhulukazi ezinyaweni zakho) izohluka kakhulu.
Okufanayo kuya ngamahhanisi we-canicross. Lokhu kubonakala ngokuba ukugoqa ezindaweni ezithile lapho isilwane sizokwenza khona umzamo omkhulu womzimba, njenge-sternum. Zilula kakhulu futhi zizama ukunethezeka esilwaneni, ukuze singazihluphi lapho sigijima futhi ngasikhathi sinye singazizwa sinengcindezi yokudonsa umuntu, noma sizilimaze.
Ngokuya ngohlobo lwe-canicross, uhlobo lwenja, ubukhulu bayo, njll. uhlobo olulodwa noma olunye luzonconywa ngaphezulu.
Lapho uthenga i-canicross harness, kufanele ucabangele okulandelayo:
Ungayithengi kakhulu. Uma inja yakho iyi-escapist, kunezinhlobo ezigxile kulolu hlobo lwenja. Kepha kukonke kufanele ukuvumele ukuthi kuphefumule, futhi, ngaphezu kwakho konke, ukuthi ihhanisi ngeke licindezele ubambo lwesilwane ngoba ungalifaka engozini. Icebo elincane lokwazi ukuthi ngabe lilungile yini ukuthi ungafaka iminwe emibili okhalweni, esifubeni nasentanyeni.
Kufanele uhlole ukuthi isilwane singakwazi yini thatha umoya ojulile ngaphandle kokuzizwa ungakhululekile ngakho.
Ine- ukuxhumana okuphezulu. Lezo zintambo ezixhuma ngemuva zikulungele kangcono ukusikwa, hhayi ukweqa. UMushing empeleni udonsa isihlibhi.
Qiniseka ukuthi i-harness ayikho yinde kakhulu, ngoba izoyenza ingakhululeki futhi ukunyakaza kwayo kungaba yingozi kakhulu futhi kube nokwenzeka kokulimala.
Ngingakwazi ukusebenzisa i-harness ejwayelekile ye-canicross?
Ngokunikezwe okungenhla, lo mbuzo uphendulwa cishe. Ihhanisi elijwayelekile aligxilile ekwenzeni umsebenzi womzimba, ingasaphathwa eyokuthi isilwane sidonse umnikazi waso ngandlela thile. Eqinisweni, uma unenja, uzokwazi ukuthi, lapho efuna ukugijima kepha ungafuni, umzabalazo owenziwayo uyingozi esilwaneni.
Ngalesi sizathu, noma ngabe ukusebenzisa amahanisi ajwayelekile kungenzeka, akunconyelwe i-canicross. Futhi, ngezansi sikunikeza izizathu (ngezinzuzo) zokusebenzisa empeleni okokusebenza okukhonjisiwe, okungukuthi, i-canicross harness.
Izinzuzo zama-canicross harnesses
Ngemuva kwakho konke esikutshele khona, akukho kungabaza ukuthi ukubopha i-canicross kuyindlela engcono kakhulu uma ufuna ukuqhuba lo mdlalo nenja yakho. Kepha, uma izinzuzo zalolu hlobo lwezesekeli zingakucaceli, lapha sikutshela into esemqoka kulokho abagqame khona.
Ukuthi unethezekile ehabheni. Ngokuba nezingxenye ezihlanganisiwe, ikakhulukazi ezindaweni lapho kutholakala ingcindezi eyengeziwe, kufinyelelwa ukuthi isilwane asihlupheki futhi ngasikhathi sinye sizizwa sikhululekile lapho sizijwayeza i-canicross.
Gwema ukulimala enjeni. Ngenxa yalolo padding, futhi ngenxa yokuthi la mahhanisi enzelwe i-canicross, uzovikela inja ekulimaleni.
Sebenzisa okokusebenza okugxile ekusebenzeni ngokomzimba. Ngoba lolu hlobo lwezemidlalo ludinga izesekeli ezikhethekile ukuze kungabikho zingozi ezinjengokulimala, ukuphunyuka kwenja, ukusha, njll.
Izinhlobo ezinhle kakhulu zamahhanisi we-canicross
Uma usuvele ucabanga ukuthola ihhanisi le-canicross, kufanele wazi ukuthi imiphi imikhiqizo engcono kakhulu, lapho abantu abaningi bathembela kwikhwalithi yabo. Eziningi zazo azishibhile, kepha zikufanele ukuvikelwa ezikunikezayo, kanye nokuqina kwezesekeli. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yiziphi esizincomayo? Zimi kanje:
Siya eNorway ukuyokwazi imvelaphi yalo mkhiqizo. Kukhethekile kwimishini yezinja futhi, uma sibheka indawo lapho itholakala khona, sizobona ukuthi ingenye yezinja ezihamba phambili, kungaba nge-sled noma ku-canicross.
Ngokuphathelene nemiklamo yabo, bazama ukukwenza ziyakwazi ukuguquguquka, zigxiliwe futhi awuzizwa kahle inja, ukuze ikhululeke ngangokunokwenzeka.
ISpeedog isitolo esiku-inthanethi esikhethekile emikhiqizweni, izesekeli nokugcwaliswa, kokubili kwabantu nezinja, ukwenza i-canicross, mushing, izintaba, ukuzingela, ukubhayisikili, njll.
Imikhiqizo abayithengisayo yile ikhwalithi ephezulu kakhulu futhi igxile kubachwepheshe, ukunakekela kakhulu impilo nokunethezeka kwesilwane. Azinawo amahanisi kuphela, kepha neminye imikhiqizo efana namabhuthi, izithasiselo zokudla, njll.
INeewa ingumkhiqizo osezingeni eliphakeme wase-Italy. Inikeza imikhiqizo okwamanje okuyireferensi lapho uthenga ama-harnesses ezinja, hhayi i-canicross kuphela, kepha ngokujwayelekile. Kulokhu, kugxilwe kuzesekeli zezemidlalo zezinja, zigqama ngaphezu kwakho konke nge-ergonomics yazo.
Bakhona yakhelwe ukuzivumelanisa nezinhlobo zezinja, ngemichilo yokulungisa nezinto zokuphefumula neze-hypoallergenic ezizovimbela ukuqhwa nezinye izinkinga ezilwaneni.
IDecathlon iyindlela "eshibhile" okufanele uthenge ngayo amahhanisi ezemidlalo ezinja. Eqinisweni, kuyo uzokwazi ukuthola konke okudingayo ukuze wenze i-canicross.
Yize amamodeli enqunyelwe, ikhwalithi yalezi, noma ingekho ezingeni lemikhiqizo yangaphambilini, yamukelekile impela. Inqobo nje uma ungazijwayezi ngokomsebenzi, bazokusebenzela kahle.
Ungathenga kuphi ihhanisi le-canicross
Uma ufuna i-canicross harness, ungahlali neyokuqala oyibonayo, kunezitolo eziningi lapho ungathola khona amamodeli athokozisayo, njenge:
kiwiko: Ingesinye sezitolo esigxile kuzesekeli zezilwane ezifuywayo. Imvamisa bane- ikhathalogi ebanzi, noma kunqunyelwe, ngemikhiqizo esezingeni elithengiswa kakhulu futhi ekhethwa ngabathandi bezilwane.
Amazon: E-Amazon unethuba lokuthenga esitolo esikhulu esinamabhizinisi amaningi abamba iqhaza ngokubonisa ikhathalogi yabo. Lokho kukuvumela ukuthi ube nakho izinketho eziningi zokukhetha amahhanisi wakho we-canicross. Ukuhlukahluka okuningi, osayizi, imibala nemiklamo. Yilokho ozokuthola kulesi sitolo.
Tendenimal: I-Tendenimal, njenge-Kiwoko noma i-Zooplus, ingenye yezaziwa kakhulu phakathi kwalabo abanezilwane. Uma kwenzeka kuba ama-harnesses we-canicross anokunye okuthile nabanye okungenziwa kubo lokhu kusetshenziswa.
zooplusNgokuqondene namahhanisi e-canicross anekhathalogi elinganiselwe kepha konke lezi ezithengisayo zisezingeni eliphakeme kanti ezinye zazo zinezilinganiso ezinhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » I-Canicross harness
Izingubo zezinja ezincane: amajazi afudumele namajezi